फोटोग्राफीको उचाई : ओपो एफ११ प्रोका साथमा सगरमाथा बेस क्याम्पको यात्रा :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
फोटोग्राफीको उचाई : ओपो एफ११ प्रोका साथमा सगरमाथा बेस क्याम्पको यात्रा
सगरमाथाको उचाईसंग प्रेरित हुँदै ओपोले पहिलो पटक पर्वतारोही डा. निमानाम्ग्याल शेर्पा र फोटोग्राफर आदम मेंगसंग सहकार्य गर्दै एभरेष्ट भेस क्याम्प ट्रेक गरी आफ्नो नयाँक्यामेरा फोन एफ११ प्रो मार्फत राजसीतस्विरहरु खिच्ने जमर्को गरेको छ ।
सुन्दरता हेर्ने मानिसको दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छ, यो भनाई एफ११ प्रोका लागिपनिउपयुक्त देखिन्छ । सगरमाथाको महिमा र भब्यताबाट प्रभावितहुँदै एफ११ प्रो मार्फत ओपोले यसको लोभलाग्दो सन्दरताखिच्ने जमर्को गरेको छ । कम्पनीले तस्विर मार्फत यात्राको रोमाञ्चकता नजिकबाट पस्किने जमर्को गरेको छ । खाना, पानी समेत विलाशिताका बस्तु झैँ अनुभवहुने बाटोमाजहाँआरोहीले यात्राअवधिभर आफ्नो वजनको दोब्बर सम्मभारी बोक्नु पर्छ, एफ११ प्रोले तिनकाक्यामेराको स्थानमात्रलिएन साथै, यसमाउपलब्धविभिन्नफिचर्सको माध्यमबाट यात्रालाई अविस्मरणिय समेत बनायो ।
एफ११ प्रोबाट खिचिएकातस्विरहरुमाप्राकृतिक दृष्यको सुन्दरता, सांस्कृतिक समृद्धि र ताजापनपाउन सकिन्छ । त्यहीनयाँपनको प्रत्याभुतीदिने सोचका साथतलदिइएकातस्विरमाहिमालयको अहिले सम्मनखिचिएको भागपनितस्विरका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
जहाँ जमिन र आकाशको संगम हुन्छ, हावाको गति तिब्र र छायाँ साँघुरा । एफ११ प्रोले हिम श्रृंखलाको पवित्र सुन्दरता कैद गरेको छ । दिमागमा आउने कुनै शब्दले यी दृष्यको बर्णण गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।
हिमालयाको कञ्चन सन्दरताको अनुभव उसैले मात्रगर्न पाउँछ, जसले यसको उचाई माप्ने सामथ्र्य राख्छन् । तर, सबैका लागिओपोले एफ११ प्रो मार्फत ती दृष्यलाई सटिकरुपमा उतार्न सफलभएको छ, एक कलात्मकप्रतिपादनको नमुनाका रुपमा ।
सम्भवतः स्वर्ग यस्तै देखिन्छ । एफ११ प्रोको वाइड एंगल शटले ल्याण्डस्केप निकै सुन्दर तरिकाले कैद गरेको छ, एक प्रखर कलाकारको पेन्टिङ जस्तै । यादगर्नु भएनहोला, तस्विर उल्टो छ । तस्विरको सुन्दरताले तपाईको मस्तिस्कलाई त्यो कुरा मापनगर्ने समय नदिएको हाम्रो विश्वास छ ।
रातमा बेसक्याम्पको चमक
कुनै अलोकिक स्थानको रातझैँ देखिने यो दृष्यएफ११ प्रो मार्फत खिचिएको हो । फोनमा समाहित रंग मिलान र ह्वाइट ब्यालेन्स क्षमताले हिमाली भेगको सुन्दर दृष्यमनमोहक रुपमा कैद गर्न सफलभएको छ ।
याक, फलामे पुल र प्रार्थना झण्डाहरु विश्वको यस पाटोका अभिन्नअंगहुन् । बाटो तथाफलामे पुलमाभारी बोक्नयाकको प्रयोग गरिन्छ । तस्विरले यात्राकालागि प्रेरित अवश्यगर्यो होला तर, यो यात्रामानिस्कनवास्तवमै दरिलो मुटुको आवश्यकता पर्छ । यात्रामाअनेकन पटक देखिने प्रार्थनाका झण्डाहरुले यात्राअवधिभर यात्रुलाई प्रेरणा र शक्तिप्रदान गर्छ ।
वेतोडले फरफराइ रहने झण्डाले स्थिर हिमालयको विपरित अर्कै कथा बताइरहेको हुन्छ । लाग्छ सोधिरहेछ, के तिमी यहाँको हुरी थेग्न तयार छौ ? एफ११ प्रोका साथमा फोटोग्राफरले गति र स्थिरता एकै साथ तस्विरमा निकै मनमोहक तरिकाले खिचेर सफल प्रस्तुति दिएका छन् ।
यात्राका दौरान जस्तो सुकै मै हुँ भनेतापनि, चिसो बतास र न्यून अक्सिजनले आरोही माथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । तसर्थ, सुत्न तथा तातो चियाको चुस्किका लागि यीनले विश्राम स्थलका रुपमा काम गर्छ । धन्न, यहाँ पनि एफ११ प्रोले राम्रै काम दिइरकेको थियो ।
सबै चम्किने बस्तु सुन हुँदैनन्,सिधै स्वप्न चित्रबाट, हिमाल पारीको त्यो ‘एम्बर’– वास्तवमै एफ११ प्रोको अल्ट्रा नाइट मोडबाट खिचिएको सबैभन्दा अमुल्य स्मृति हो ।
विश्वकै सर्वोच्च शिखरको चुचुरोमा पुग्ने कठिन र रोमाञ्चक यात्रामा निस्कँदा, बल्ल– वास्तवमै प्रकृति कति शक्तिशाली र सुन्दर छिन् भन्ने ज्ञान हुन्छ । अदृतिय क्षमता र फिचर्सद्वारा सुसज्जित एफ११ प्रो मार्फत फोटोग्राफी मोडका लागि सेटिङ मिलाइ रहने झञ्झट विना अमुल्य पललाई तस्विरका रुपमा सहजै कैद गर्न सघाउँछ । एफ११प्रोमा कैद यी तस्विरका माध्यमबाट सगरमाथा सदैव अविस्मर्णिय स्मृतिका रुपिमा मानसपतलमा रही रहनेछन् ।